​पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य (मतअन्तर र प्रदेशको सुचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य विजयी भएका छन् । उनी प्रेस चौतारीका तीर्थ कोइरालालाई झण्डै एक सय मत अन्तरले हराउदै विजयी भएका हुन् । आचार्यले ७ सय ३२ र कोइरालाले ६ सय २७ मत पाए ।
​बिजुलीको बिल अब बैंकबाटै तिर्न सकिने, हेर्नुहोस् कुन कुन बैंकबाट तिर्न सकिन्छ
काठमाडौ । बिजुलीको बिल तिर्न टाढा जानु परेको छ ? विद्युत् प्राधिकरणको काउण्टर तथा कार्यालय टाढा भएर दुःख पाइरहनुभएको छ भने अब चिन्ता गर्नुपर्दैन । बैंकमार्फत् अनलाइन प्रणालीबाट बिजुलीको बिल तिर्न सकिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौ ५ गते सोमवारदेखि विभिन्न बैङ्क....
दोलखा केन्द्रविन्दु भएर परकम्प
काठमाडौं । दोलखा केन्द्रविन्दु भएर सोमबार साँझ पराकम्प गएको छ।
सोमबार साँझ ५ बजेर ४८ मिनेटमा दोलखाको जुगु केन्द्रबिन्दू बनाएर ४ दशमलव ६ म्याग्निच्यूडको परकम्प गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले यो गोरखा भूकम्पकै परकम्प हो। काठमाडौंमा समेत भूकम्पको धक्का महशुस....
​बबई नदीको पुल सरकारलाई हस्तारन्तरण नहुँदै भाँचियो
काठमाडौं । बर्दियाको जग्दिघाटस्थित बबई नदीमा निर्माण गरिएको पुल हस्तारन्तरण नहुँदै भाँचिएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनद्वारा निर्मित उक्त पुल सरकारलाई हस्तान्तरण नहुँदै गत साता भाँचिएको हो ।
ठेकेदारको लापरबाहीका कारण उक्त पुलको अवस्था यस्तो भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले....
​बाढी पहिरोबाट हालसम्म १ सय ४३ को मृत्यु, ३० बेपत्ता
काठमाडौं । गत हप्ता आएको अविरल वर्षा र बाढीका कारण देशभर हाल सम्म एक सय ४३ को मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीबाट अझै पनि ३० जना बेपत्ता रहेका आइतबार साँझ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ४३ जना....
​आज बाबुको मुख हेर्ने दिन तथा कुुसे औँसी
काठमाडौं । भाद्र कष्ण औँसीको दिन आज देशभर बाबुको मुख हेरी मनाइदैछ । औँसीको दिनमा छोराछोरीहरू आआफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाइ तथा भोजन गराई आदर सम्मान प्रकट गर्छन् । यसैकारण आजको दिनलाई ‘बाबुको मुख हेर्ने’ दिन र पितृ दिवस भनिएको हो ।
ज्योतिष डा. सुनिल....
​सापकोटा वाईसीएलको अध्यक्ष चयन
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट वाईसीएलको अध्यक्षमा रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ सर्वसम्मत चुनिएका छन् । महासचिवमा सुवोधराज शेर्पाली चयन भएका छन् । शुक्रबारदेखि काठमाडौंको कोटेश्वरमा सुरु भएको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले आइतबार दीपशिखाको नेतृत्वमा १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो । सापकोटा....
​पत्रकार महासंघको महाधिवेशन सुरु, भोलि चुनाब हुने
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशन आइतबारदेखि काठमाडौमा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन उद्घाटन गरे । महाधिवेशनमा ४५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयनका लागि देशभर र प्रवासबाट समेत गरेर १ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी भएका छन । सोमबार नेतृत्व....
​सोमबारदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने
इटहरी । यातायात व्यवस्था विभागले सोमबारदेखि सवारी साधनमा विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट राख्न शुरु गर्ने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राष्ट्रपति, सरकारी, व्यावसायिक र निजी गरी चार प्रकारका रहनेछन् । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि सवारी चोरी हुने समस्या र अपराधका काममा प्रयोग....
​राप्रपा संविधान संशोधनको विपक्षमा
मकवानपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । हेटौडामा आइतबार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले मधेस र मधेसी जनताको मूलभूत हक, हित र....